လူထု မောင်ကာဠု: ဗြိတိန်မှာလည်း သနားလို့ ဒုက္ခသည်ပေးထားတဲ့ ဧည့်သည်က အိမ်ရှင်ကို စော်ကား
ဗြိတိန်-ပါကစ္စတန်နွယ်ဖွား လူငယ်တစ်စုဟုဖော်ပြထားသည့် ဂိုဏ်းတစ်ခုက ဗြိတိန်သူအမျိုးသမီးလေးများအား ဘက်စ်ကား မှတ်တိုင်တစ်ခုတွင် တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်ကိုပြသသည့် ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခု အင်တာနက်အွန်လိုင်းပေါ်တွင် ပျံ့နှံ့ခဲ့ပြီးနောက် ဗြိတိန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရှိ အက်ရ်ှတွန်အန်ဒါလင်းမြို့တွင် တင်းမာမှုများ အလွန်အမင်းကြီး ထွားလာခဲ့သည်။
ထို video ကို youtube မှာတင်ထားတာကို ဖျက်သွားပေမဲ့ အောက်ပါလင့်ကနေ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ရေးသူ လူထု မောင်ကာဠု အချိန် 07:35
အမျိုးအစာ Islam Virus
SO,, HOW ABOUT ,,MR DAVID CAMMERON? YOU MUST PUSH OUR PRESIDENT...
BUT HE IS NOT MOVE4 ABOUT OUR 1982 RULES. YOU CAN PICK UP ALLMUSLIMS AND ALLL BANGLI FROM MYANMAR,,
THIS IS OUR UNIVERSAL TRUTH..RULES